Users.२3.24% प्रयोगकर्ताहरू मारिएका छन् Martech Zone
बुधवार, जनवरी,, २०१२ शनिबार, जून १,, २०१। Douglas Karr
सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरूको भर्खरको जनगणनामा, यो पहिचान गरियो कि सबैको 3.24..२XNUMX% फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू वास्तवमै थिए मृत। मृत माइस्पेस प्रयोगकर्ताहरूले फेसबुक trump..7.46%% मा ट्रम्प गरे। यो रमाईलो तथ्या .्क हो किनकि यसले सामाजिक नेटवर्कहरूले विज्ञापनदातालाई कसरी चार्ज गर्दछ र उनीहरूले कसरी बृद्धिलाई मापन गर्छन् भन्ने प्रश्न उठाउँदछ।
सामाजिक नेटवर्क वास्तव मा संख्या को रिपोर्ट छैन संलग्न प्रयोगकर्ताहरू न त उनीहरूको संख्या मापन गर्छन् मृत जसलाई विज्ञापनदाताहरू सामाजिक मिडियामा प्रयोगकर्ताहरूको संख्याको आधारमा विज्ञापनहरूको लागि भुक्तान गर्दछन्, त्यसैले मृत विज्ञापनहरू तपाईंको मार्केटिंग बजेटबाट लाखौंको दूरी निकाल्न सक्दछन्।
मरेका फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूमा टिप्पणी गर्न सोध्दा, मार्क जुकरबर्गले केवल "कुनै टिप्पणी छैन" र केवल सन्दर्भित गरे विज्ञापनदाताहरू प्रयोगका सर्तहरू:
नोट: यो एक व्यंग्य पोष्ट हो। परिमाणहरू बनाइएको थियो र मैले मार्क जुकरबर्गसँग वास्तवमै कहिले पनि कुरा गरेको छैन। मैले प्रयोग गरेको फेसबुक सर्तहरू सम्पादन गर्न फायरबग प्रयोग गरें र स्क्रिनसट लिएँ।
मेरो कुरा यो हो कि म यी नेटवर्कहरूमा विज्ञापनदाताहरूको संख्यालाई विश्वास गर्न सक्दिन कि वास्तवमै संलग्न प्रयोगकर्ताहरूको संख्या के हो भनेर थाहा छैन। सगाई एक संख्या हो जुन ठूलो सामाजिक नेटवर्कहरू डराउँदछन्।
तिनीहरूले रेजिष्टर गरिएको प्रयोगकर्ताहरू नाप्दछन् ... चाहे तिनीहरू जीवित छन्, मरेका छन्, निस्क्रिय छन्, नक्कल छन्, वा लग ईन गरेका छैनन्। हामीलाई थाहा छैन कति पैसा फ्याँकिएको छ।
टैग: मृत प्रयोगकर्ताहरूसंलग्न प्रयोगकर्ताहरूफेसबुकमाइस्पेस
जनवरी 27, 2009 मा 3: 09 एएम
वाह त्यो यस्तो चीज हो जुन तपाईंले कहिल्यै सोच्नु भएको थिएन। यो ठेस लाग्न आवश्यक छ!
हे! त्यो साँच्चै रोचक सुनिन्छ ... के तपाई मलाई जनगणना दिन मन पराउनुहुन्छ? मैले अझै फेला पार्न सकिन। मलाई यो कागजी कार्यको लागि चाहिन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद!